Oganda: Fahatsiarovana an’i Bangi · Global Voices teny Malagasy
Oganda: Fahatsiarovana an'i Bangi
Voadika ny 03 Aogositra 2018 3:36 GMT
(Marihina fa tamin'ny 11 Novambra 2007 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nahatsiaro tamim-pitiavana ny fahafatesan’ ilay Ogandey Wilfred Bangirana, olo-malazan'ny onjam-peo, ireo bilaogera noho ny talentany tamin'ny naha DJ tranainy azy. Namoaka teny mamy ho fanomezam-boninahitra azy i Eddyslahh ao amin'ny bilaogy Mixed Notions:
Tsaroako ny fotoana iray niarahako nandeha niaraka tamin'ny dadatoako tany amin'ny trano fandihizana ho an'ny alin'ny zokiolona ary i Bangi no nampandihy tao ary nandà ny hiala teo amin'ny sehatra fandihizana ry zalahy satria nitondra azy niverina tamin'ny fotoan'androny i Bangi fony izy ireo mbola tanora sy natanjaka. Tsy niala teo amin'ny sehatra fandihizana izy ireo raha tsy ny mpiambina (videurs) no nangataka azy ireo hivoaka satria efa tonga ny fotoana tokony hikatonana….
Iray amin'ireo olona nahatonga ahy ho tia mozika tranainy i Bangi ary izany no antony nahatonga ahy tsy tapaka nanaraka ny fandaharany mampiala-voly tao amin'ny sanyu fm satria fantany hatrany ny hira tokony ho alefa, toy ny hoe fantatr'ilay bandy tsara ny zavatra tiako hohenoina .
Fanehoan-kevitra tamin'ny fanambarana nataon'ny filoha Yoweri Museveni fa “tsy mila vola izy hialàna amin'ny fahefana”, dia somary famelezana ny filoha Mozambikana teo aloha Joachim Chissano taorian'ny nandraisany ny Loka Mo Ibrahim mitentina 5 tapitrisa $ tamin'ny Fanatontosana ny Fitarihana Afrikana tamin'ny volana lasa teo.
Be fanontaniana i Minty :
Nahoana ny fanitsiana teny amin'ny solosaiko no manome ahy ny teny hoe “Fialamboly sy Tsy ara-dalana” rehefa manandrana mitendry ny anaran'ny filohantsika mahatsinjo lavitra Museveni aho?
Misy ifandraisany amin'ity tantara ity ve izany?
Raha nikorapaka i Phantom :
Inoako fa lainga izany, izay firaisana tsikombakomba nataon'ireo fampitam-baovao mba hanaratsiana ny anaran'ny ray aman-dreny be. Hisy ny atidoha manodikodina ary ny olona miala tsiny sy izany rehetra izany saingy kely ny sandan'izany handoavana ny safidy hafa. Fa ny tena eritreretin'ny filoha dia resa-bola ny loka.
Ary farany, andian-tsary tsara tarehy avy amin'i Bethany, nalaina tao amin'ny Tsena Owino any Kampala tamin'ny tolakandron'ny Asabotsy avy orana: